हार्दिक श्रद्धान्जलि ! लन्डनमा धरानका युगल लिम्बू मृ’त अवस्थामा भेटिए – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/हार्दिक श्रद्धान्जलि ! लन्डनमा धरानका युगल लिम्बू मृ’त अवस्थामा भेटिए
हार्दिक श्रद्धान्जलि ! लन्डनमा धरानका युगल लिम्बू मृ’त अवस्थामा भेटिए
बेलायतको केन्ट आसफोर्डस्थित विगत ४ बर्ष देखि बसोबास गर्दै आएका सुनसरी धरानका युगल लिम्बू मृ’त अवस्थामा भेटिएका छन् । लिम्बुको श’ब भिक्टोरिया पार्क नजिकैको स्टा’वर नदिमा सोमबार मृ’त अवस्थामा भेटिएको हो । ३३ बर्षिया लिम्बु गत ७ मार्च , सनिवार दिउँसोबाट सम्पर्क विहिन भएका थिए ।
युगललाई खोजि गर्न केन्ट प्रहरीले नेपालीहरु समक्ष निवेदन समेत जारी गरेका थिए । सु’रक्षा विभागमा कार्यरत लिम्बु सनिवार साझँ आफ्नो सु’रक्षा क’र्तव्य सकेलगतै आसफोर्ड बजारबाट आफ्नो घर तर्फ हिडदै गएको सिसिटिभी फूटेजमा देखिएका थिए ।
ति’व्ररुपमा प्रहरी हेलिकप्टरद्वारा खोजिएको लिम्बुको श’ब भि’क्टोरिया पार्क नजिकैको स्टावर नदिमा सोमबार भेटिएको छ । लिम्वुको श’वलाई पो’ष्टमार्टमको लागि अस्पताल लगिएको प्रहरीले जानकारी दिएका छ ।
भ’द्र र शा’लिन स्व’भावका लिम्बुको नि’धन कसरी भयो भन्न नसकिए पनि स्टावर नदि नजिकै छु’रा प्र’हार गरी ह’त्या गरिएको आंशका गरिएको छ । वेलायती नेपाली स’माज भित्र पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका ज’घन्य अ’पराध घ’टिरहेको छ । घ’टनास्थल प्रहरीले घे’राबन्दी गरेर राखेको छ ।
भारतलाई रुसले दिने भयो १० करोड डोजको कोरोना खोप
हातमा सीप छैन ? निःशुल्क सिक्नुहोस्